Hamro Online NewsNepal's Leading News Portal | काँग्रेस रामेछापका नेताहरुको नजरमाः स्वर्गीय काँग्रेस नेता रुद्रप्रसाद ढुङ्गेल - Hamro Online News
काँग्रेस रामेछापका नेताहरुको नजरमाः स्वर्गीय काँग्रेस नेता रुद्रप्रसाद ढुङ्गेल
मङ्लबार, जेष्ठ ६, २०७७ | onlinenews
रुद्रप्रसाद ढुङ्गेलजीमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली
२०१७ साल पुष १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि २०१८ साल देखिनै शाही कदमको विरुद्धमा पञ्चायती व्यवस्था रहुन्जेल रुद्रप्रसाद ढुंगेलजी नेपाली काँग्रेसले चलाएको हरेक क्रान्ति र आन्दोलनमा सक्रिय रहनु भयो । स्वदेशमा रहँदा हास् या प्रवासमा रहँदा प्रजातन्त्रको लागि उहाँले पु¥याउनु भएको देन प्रसंसनीय छ ।
मेरो उहाँसँगको सान्निध्यता २०३७ सालको जनमतसंग्रहदेखि भएको हो । अत्यन्त मिलनसार, मृदुभाषी एवं कुनै पदको लोभलालसा नराख्ने रुद्रप्रसादजी सँधै नेपाली काँग्रेस पार्टीको हितमा कार्य गर्नु हुन्थ्यो । रामेछाप जिल्लाका नेपाली काँग्रेसका नेताहरूका बारेमा चर्चा परिचर्चा हुँदा गिरिजाबाबुले सँधै सम्झने व्यक्तित्व मध्ये एक हुनुहुन्थ्यो रुद्रप्रसाद ढुंगेलजी । उहाँको त्यति राम्रो प्रभाव गिरिजाप्रसाद कोइरालामा परेको थियो ।
देश अहिले कोरोनाको महामारिका कारण लकडाउन भएको अवस्थामा उहाँको अपर्झट निधन भयो । उहाँलाई अन्तिम श्रद्धान्जली दिन आर्यघाटसम्म पनि पुग्न नपाएकोमा मलाई अत्यन्त दुःख लागेको छ ।
प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अथक योद्धा रुद्रप्रसाद ढुंगेलजीको देहावसानले नेपाली काँग्रेस रामेछाप जिल्लालाई अपुरणीय क्षति भएकोछ । जिल्लाले एउटा अभिभावक गुमाएको छ । मैले एउटा अत्यन्त निकट मित्र गुमाएको छु । रुद्रप्रसादजीमा भावपूर्ण श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना ब्यक्त गर्दछु ।
पूर्व प्रमुख सचेतक नेपाल काँग्रेस संसदीय दल
रामेछापका एक तारा आस्ताए
नेपाली काँग्रेस पार्टीप्रति इमान्दार, बफादार आदर्श पुरूष, सानै उमेरमा राजनैतिक आस्थाका कारण ८ वर्ष भारत प्रवासमा बस्नुभएका, नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सशस्त्र प्रजातन्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेवापत पटक पटक गरि ७ वर्ष राजनैतिक कैद भुक्तान गर्नु भएका प्रजान्त्रतिक सेननी संघका केन्द्रिय सदस्य एबम पूर्व महसमिति सदस्य आदरणीय दाई रुद्र प्रसाद ढुङ्गेलको निधन ले स्तब्ध बनायको छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सधै सक्रियताका साथ लगिपर्नुभएका रुद्र दाइको निधनले हामीले लामो समयको इमान्दार सहयात्री तथा एक असल आभिवावक गुमाएका छौं ।
सभापति-नेपाल काँग्रेस, रामेछाप
मेरो सम्झनाको रुद्र दाजु
२०२७÷२७ सालतिर तिर मेरो चिनारी भयो रुद्र दाजु, पद्मशंकर दाजु, साने श्रेष्ठ मिनबहादुर दाजु देबिबहादुर तामाङ, लक्ष्मी दास दाजु मोतिलाल श्रेष्ठहरुसँको सामिप्यता नै मेरादाजु शिबबहादुर खड्काको राजनीतिक जिवन हो ।
पञ्चायत कालमा रामेछापमा पञ्चायति ब्यवस्था इतरको संरक्षण गर्नु, स्कूल निर्माण गर्नु, नेबिसंघ बनाउनु, प्रसाशनको तारोबन्नु पटक–पटक प्रहरी हिरासतमा रहनु आफ्नो अभियानबाट बिचलित नहुनु परिवार र सम्पतिको परवाह नगर्नु, उहाँको आदर्श थियो । जुनबेला दाजु पार्टीको जिल्ला उपसभापति हुनुहुन्थो २०४६ माघ १ मा हुनाहार प्रजातन्त्रवादी कृष्णदासको हत्या भयो । त्यस प्रकरणलाई पञ्चले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरागर्ने र रुद्र दाजुको राजनीतिक हत्या गर्ने हतियर बनाए । त्यही बेला ०४६ को जनाअन्दोलन सुरु भयो । सफल भयो तर फेरि वामपन्थीले कृष्णदास काण्डलाई राजनीतिक करण गरे । जस्तो मदन भण्डारी काण्डको परिणामले दाजुपछि पर्नुभयो । यदि यसो नभएको भए मध्यपहाडको दुई मात्र नेता हुने थिए । एक भिमबहादुर र अर्को रुद्रप्रसाद त्यो महायोद्धाको देहबासन भएको छ । उहाँको आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु । परिवारजन, उहाँको अनुयायि राष्ट्रवादी, प्रजातन्त्रवादी, समाजवादीहरुप्रति समवेदना ब्यक्त गर्दछु ।
पूर्व पार्टी सभापति नेपाली काँग्रेस, रामेछाप
राजा महेन्द्रले अंगिकार गरेको एक दलीय पञ्चायती व्यवस्था जनहित, देशहित तथा जनताको सबै खाले अधिकार हनन् भएको महसुस गरि नेपाली काँग्रेसले जनताका हकअधिकार स्थापनाको लागि सञ्चालन गरेको पञ्चायत बिरोधी आन्दोलनमा होमिएका आटिला सहसिक र निर्भिक हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय रुद्रप्रसाद ढुङ्गेल । यसरी पञ्चायत विरुद्ध नेपाली काँग्रेसले सञ्चालन गरेको सशस्त्र क्रान्तिमा भाग लिदा रामेछापका तत्कालिन बडाहाकीमको घरमा २०१८ सालमा बम प्रहार गर्नु भएका रुद्रप्रसाद ढुङ्गेल २०१८ देखि २०२५ सालसम्म प्रबासमा रहनु भएको र पटक–पटक गरि ८ वर्ष जेलजिवन समेत विताउनु भएको थियो । उहाँको यो साहसिक कामप्रति हार्दिक सलाम गर्दछु । साहसिक र निर्भिक रुद्र दाइले हामीसँग ब्यक्त गरेको भावनाको आधारमा नेपाली काँग्रेस रामेछापको ११ औ जिल्ला आधिवशनमा उहाँलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गरिएको थियो । मलाई अहिले पनि ताजा स्मरण छ, उहाँ स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मतदान गर्न लालाहित हुनुहुन्थ्यो । आज त्यही व्यक्ति, निडर योद्धा प्रजातन्त्रका सेनानी हामी सामू रहनु भएन । अब केवल हामीसँग उहाँको स्मरणहरुमात्र रहिरहने छन् । अत्यन्त दुःखित मुद्रमा उहाँको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै उहाँको परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना ब्यक्त गर्दछु । स्व. रुद्रप्रसाद ढुङ्गेलको स्वर्गमा बास होस्, भगवानसँग प्रार्थना गर्दछु । जय नेपाल !
नेता नेपाली काँग्रेस, रामेछाप
२०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि प्रतिरोध क्रान्तिमा होमिएका योद्धा रुद्रप्रसाद ढुङ्गेलको जन्म १९९६ साल जेष्ठमा भएको हो । उहाँले प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि बम र बारुद्धसँग खेल्नु भयो । २२ वर्षको उमेरमा बडाहाकीमको कर्यालयमा बम हानेर तहल्का मच्चाउनु भएको थियो । निरंकुश शासकको मुटु हल्लाउनु भको थियो । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लडाइँमा लागेको कारण ७ वर्ष भारत (जयनगर) प्रबासमा रहि गुरिल्ला तालिम लिनुभयो । त्यसपछि पटक–पटक गरि झन्डै ८ वर्ष जेलजिवन बिताउनु भयो । २०३५ सालमा जेलबाट छुटेपछि पनि राजनीतिमै सक्रिय रहनुभयो । जनमत संग्रहमा बहुदलको हार भएपछि पनि काँग्रेसको संठनमा लागिरहनु भयो । सामाजिक कामहरु गर्नुभयो, गाउँमा हाइस्कूल स्थापना गर्नु भयो । पञ्चायतको चुनावमा प्रजातन्त्रवादी उम्मेदवार उठाएर पञ्चायतको विरुद्धमा लागिरहनु भयो । पदमा रहन कहिल्यै दाबी गर्नु भएन । साथीहरुको आग्रहमा प्रतिबन्धित कालमा पार्टीको उप–सभापति हुनुभएको थियो । पार्टीको भातृसंस्था प्रजातान्त्रिक सेनानी संघको केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो । हाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघको केन्द्रिय प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ एक निष्ठावान, इमान्दार, साहसी र अनुशासित नेता हुनुहुन्थ्यो । नेताहरु बि.पि., गिरिजाप्रसाद र सरोज कोइरालाको अति विश्वास–पात्र हुनुहुन्थ्यो ।
नेता नेपाली काँग्रेस रामेछाप
नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि जीवन अर्पण गर्ने योद्धा रुद्र दाइप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली । प्रजातान्त्रिक योद्वा रुद्रप्रसाद ढङ्गेल स्वतन्त्रताका प्रतिमूर्ति, संघर्षशील, निष्ठाका धरोहर, क्रान्तिकारी नेता हुन् । उहाँको निधनबाट प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ ।
सभापति नेपाली काँग्रेस रामेछाप प्रदेश ‘ख’